Cortexolone 17α-propionate powder (19608-29-8) hplc = 98% | AASraw
MUTSVENE unoburitsa Cannabidiol (CBD) upfu uye Hemp Yakakosha Oiri muhuwandu!
Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
Fat Kurasikirwa poda
Plant Plant Extract
MaR & D Reagents
Mvura Soluble CBD
Hemp Essential Oiri
Goridhe Hemp Mafuta
Gorosi hutachiona hunobvisa hupfu
Cortexolone 17α-propionate powder
/ Products / MaR & D Reagents / Cortexolone 17α-propionate poda
Rating: SKU: 19608-29-8. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kwe Cortexolone 17A-propionate powder (19608-29-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Cortexolone 17α-propionate powder video
Cortexolone 17α-propionate powder Basic Characters
Name: Cortexolone 17α-propionate powder
Molecular Formula: C24H34O5
Molecular Kurema: 402.52
Storage Temp: Room Temperature Temperature
Color: Muchena kusvika pachena-pfu pfupa yeupfu
Cortexolone 17α-propionate cycle
Kemikari Mazita: cortexolone-17α-propionate,
Mamwe Mazita: CB-03-01, Winlevi powder, Breezula powder, 11-deoxycortisol 17α-propionate, Cortexolone 17α-propionate powder
Cortexolone 17α-propionate Usage
Cortexolone 17A-propionate inoshandiswa steroidal antiandrogen - kunyanya, anrogen anorgen receptor - iyo iri pasi pekusimbiswa neCassiopea uye Intrepid Therapeutics kuti ishandiswe semishonga yepichepi mukurapa mamiriro ezvinhu anonzi androgen-kusanganisira acne vulgaris uye androgenic alopecia (murume-pattern kuputsika kwemvere).
Ndeipi iyo inonzi Cortexolone 17α-propionate
Cortexolone 17A-propionate 1% kamu, mushonga mutsva unorwisa antirogenrogen yepamusoro-soro wehutachi vulgaris. Mutevedzeri wechikwata anonzi randomized, double-blind comparing study vs. placebo uye tretinoin 0 · 05% kamu.
Acne vulgaris chirwere chechikwata chechipiri chinogadziriswa umo inonzi androgens inobatsira kutanga kwayo nekushingaira. Kushandiswa kwe antiandrogen naizvozvo kunogona kushanda; zvisinei, antiandrogens yekushandiswa kwemashoko emitambo haisipo pamusika. Cortexolone 17A-propionate ichinhu chitsva chinonzi antiandrogen chinogona kushandiswa muzvinyorwa zvinopisa.
Kuongorora kuchengetedza uye hutano hwehutano hweCortexolone 17A-propionate 1% kamu muAcne vulgaris kana uchienzaniswa ne placebo uye neTretinoin 0 · 05% kamu.
Makumi manomwe nemanomwe evarume vane huso kumeso vakarova 2-3 zvinoenderana neInvestigator's Global Assessment (IGA) vakasarudzika kugamuchira placebo cream (n = 15), kana Cortexolone 17α-propionate 1% cream (n = 30), kana tretinoin 0 · 05 % kirimu (n = 32) kamwe pazuva pazuva panguva yekurara kwemasvondo masere. Clinical efficacy yakaongororwa mavhiki maviri ese kusanganisira yakazara lesion count (TLC), inflammatory lesion count (ILC), acne severity index (ASI) uye IGA. Kuchengetedza kwekuchengetedza kwakasanganisira mamaki ekutsamwa enzvimbo, bvunzo dzevarabhoritari, kuongorora kwemuviri, zviratidzo zvakakosha uye kurekodha kwezviitiko zvakashata.
CB-03-01-cream yakagadziriswa zvakanaka, uye yaive yakakosha kupfuura placebo pamusoro peTLC (P = 0 · 0017), ILC (P = 0 · 0134) uye ASI (P = 0 · 0090), uyewo kuchipatara zvinobudirira zvikuru kupfuura kufananidza. Chigadzirwa chacho chakakonzera kukurumidza kukurumidza kwe50% kuvandudzwa mune zvose zvataurwa pamusoro apa. CB-03-01
Ichi chidzidzo chekutsvaga chinotsigira chikonzero chekushandiswa kwemashoko anonzi antiandrogens mukurapa acne vulgaris. Cortexolone 17A-propionate 1% kamu cream inofananidzwa yakakodzana nehuwandu hwean antiandrogen yakanaka yekushandiswa kwemashoko.
Iyo Cortexolone 17A-propionate inoshanda sei
Cortexolone 17A-propionate (CAS 19608-29-8), kana 11-deoxycortisol 17α-propionate, inoshandiswa steroidal antiandrogen - kunyanya, anopesana neaorrogen receptor - iyo iri pasi pekusimbiswa neCassiopea uye Intrepid Therapeutics kuti ishandiswe semishonga yepicopic in kurapwa kwemamiriro ezvinhu a androgen-anogadzikana kusanganisira acne vulgaris uye androgenic alopecia (kurasikirwa nevhudzi-bvudzi). Ndiyo C17α propionate ester ya 11-deoxycortisol (cortexolone); C17A esters ye11-deoxycortisol yakanga isingatarisirwi kuti ine nhaka ye antiandrogen, uye cortexolone 17α-propionate yakasarudzwa kuti ibudirire zvichienderana nehuwandu hwehuwandu hwezvinodhaka.
Mumakonzo, mishonga iyi yakawanikwa iine simba yakasimba yepano antiandrogen, asi isingabatsiri systemic antiandrogen iyo inotungamirirwa kuburikidza nehutachiwana hutachiona. Mukuwedzera, cortexolone 17A-propionate haisi progonadotropic, inoratidza kuti iri kusarudzwa kamwechete. Mune chimiro chemhuka, chironga chemusoro chechirwere chakanga chiri chikuru kune cheprogesterone, flutamide, uye mari yemari uye yakanga yakaenzana neyeyproterone acetate.
Mutyairi wechipatara mutsva mu 2011 yevarume vaibatwa netikitikiti cortexolone 17α-propionate 1% kamu yeakoni yakawana kuti mishonga yakanyatsorambidzwa uye yakaderedza zvikuru zviratidzo zvepine. Uyezve, kubudirira kwacho kwaive kwakakura kudarika kweyomuenzanisi anoshanda, tretinoin 0.05% cream. SezvaA2017, mushonga uyu uri muchitsauko III kliniki miedzo ye acne vulgaris uye chirongwa chechipiri chemakiriniki ye androgenic alopecia.
Cortexolone 17α-proprionate, Breezula powder mumhando dzayo dzepolymorphic: mhuri yekutanga patent, inopera muUnited States muna 2022/23 uye muna 2022 kune dzimwe nyika, inobata kushandiswa kwechiremba kwekomboni yekurapa acne, alopecia uye zvimwe zvirwere; yechipiri patents mhuri inovhara ese anozivikanwa macristalline mafomu eAPI, nziyo dzine iyo imwechete API uye zvine chekuita nekurapa kushandiswa pakurapa acne, AGA uye zvimwe zvirwere: iyi mhuri yepamutemo yakatopihwa muUnited States, Europe, Canada, Japan uye dzimwe nyika, dzichapera muna 2030 muUnited States uye 2028 mune dzimwe nyika.Breezula powder
Cortexolone 17α-propionate Raw Powder
Min order 10grams.
Inobvunza pamusoro pezvakawanda (mukati 1kg) inogona kutumirwa mumaawa e12 mushure mekubhadhara.
Kuti uwedzere kurongeka kunogona kutumirwa mumazuva ekushanda kwe3 mushure mekubhadhara.
Cortexolone 17A-propionate Raw Powder Recipes
Kubvunzurudza Mutengi wedu Mumiririri (CSR) nezvemashoko, nekuda kwekutaura kwako.Winlevi powder
Cortexolone 17α-propionate Marketing
Kuti igoverwe mune ramangwana riri mberi.
Ko Cortexolone 17A-propionate Iine Mhinduro Dzakashata
Cortexolone 17A-propionate inoshandiswa steroidal-ester, inoparadzanisa uyerogen-antagonist, inopiwa basa risiri rinopisa simba, iro rinoratidzika rakakodzera zvakakodzera kurapa acne vulgaris. CB-03-01 inoshanda pamunhu we-androgen-receptor pasina kuvhara 5α-kuderedza mucheche. Steroid iri nyore kupinda mukati meganda revanhu uye inokurumidza kugadziriswa kuti isunungure mubereki cortexolone iyo isingashandisi systemic effects. Zvinonyanya kukosha, kuti uwane ushamwari, hazvina kuratidza chero mamiriro ezvinhu emunharaunda kana sitiroid madhara.
Nzira yekutenga Cortexolone 17A-propionate powder kubva kuAASraw
1.Kutaurirana nesu ne email yedu yekubvunza system, kana online skype Mutariri wevashandi (CSR).
2.Kutipa isu yakabvunzwa nekero.
3.Our CSR ichakupa iyo quotation, nguva yekubhadhara, nhamba yekutsvaga, nzira yekuendesa uye inofungidzirwa zuva rekuuya (ETA).
4.Payment yakaitwa uye zvigadzirwa zvichaendeswa mumaawa e12 (Kurongeka mukati me10kg).
5.Goods inogamuchira uye inopa mhinduro.
Crizotinib powder (877399-52-5)
Pyridoxal hydrochloride powder
Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) powder
Estradiol powder Series (4)
Kushandiswa Kwevarume (3)
Kushandiswa Kwechikadzi (3)
Nootropics powder (14)
MaR & D Reagents (39)
Kenza inorwisa (16)
Urolithin Upfu (2)
Spermidine Upfu (3)
Madzimai eHormoni (20)
Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni (12)
Fat Kurasikirwa poda (15)
Plant Plant Extract (3)
Cetilistat pfumbu yakakosha yekurasikirwa
Nhengo yemutambo turinabol powder: Unoziva here chokwadi nezvehupfu hweSteroid?
Kubva kuReddit & Quora: 12 Mibvunzo (Inopokana Zvakanyanya) NezveNMN
Chii chinoshandiswa Nandrolone decanoate injection?
PCT Letrozole poda yakasviba-Zvinhu zvishanu ndinofanira kuziva !!!
Wepamusoro 7 Mishonga Yekurapa Lung Cancer-Yakagamuchirwa neDFA
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo Nezve Sunitinib Malate 丨 AASraw
Ndeupi Mushonga Unonyanya Kubudirira Kurapa Gomarara Remuzamu?
Anti-Cancer Zvinodhaka Acalabrutinib: Kurapa kweCLL / SLL / MCL
Copyright © 2021 aasraw Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Disiki: Isu hatiite chero zvirevo nezve zvigadzirwa zvinotengeswa pawebhusaiti ino. Hapana ruzivo rwakapihwa pane ino webhusaiti rwakaongororwa neDFA kana MHRA. Chero ruzivo rwunopihwa pane ino webhusaiti rwunopihwa kune rwakanakisa ruzivo rwedu uye haruna kuitirwa kutsiva rairo yemurapi anokwanisa. Chero hupi hupupuriro kana ongororo yechigadzirwa yakapihwa nevatengi vedu haisiriyo maonero aasraw.com uye haifanire kutorwa sekurudziro kana chokwadi.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.anonyij.com chaida.bm www.vapeworld.com